» सामान र पैसा भुस, कता गयो घुस ?
१९ चैत्र २०७६, बुधबार २१:००
स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नी समूहको सहायक संस्था ओबीसीईसँग गरेको स्वास्थ्य उपकरण खरिद सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ । मुलुकमा कोरोना भाइरस संक्रमण बढ्ने देखिएपछि गरिएको लकडाउनसँगै विभागले उक्त समूहसँग केही दिनअघि खरिद सम्झौता गरेको थियो । चीन सरकारले सहयोगस्वरूप उपलब्ध गराएको सामानसँगै व्यापारीको सामान ल्याउन सरकारले नेपाल वायुसेवाको विमान गत शनिबार चीनको क्वाङ्चौ पठाएको थियो । सरकारले प्रतिस्पर्धा नगराई बजार भाउभन्दा निकै महँगो सामान खरिद गरेको भन्दै सोमबारदेखि व्यापक आलोचना भएको थियो ।
ओम्नी समूहले पहिलो खेपमा जम्माजम्मी १० प्रतिशत मात्र सामान ल्याएको थियो । उसले भोली ल्याउनुपर्ने दोस्रो खेपको सुरसार नदेखिएपछि सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरिएको विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले बताएका छन् । सम्झौता रद्द गरी उक्त समूहलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेपनि हालसम्म रकम भुक्तानी नदिइएको स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । योसँगै उक्त समूहले राखेको धरौटी वापतको झण्डै पाँच करोड रूपैयाँ पनि जफत हुनेभएको छ । धरौटी पनि जफत र ल्याइएको सामानको रकम समेत भुक्तानी नहुने भएपछि कम्पनीको सामानसँगै पैसा पनि भुस हुने निश्चित छ । महँगोमा खरिद गरिएको भनिएका चस्मा र मास्क पनि ओम्नीले पहिलो लटमा ल्याएको थिएन । परिस्थितिको गाम्भीर्यतालाई ध्यानमा राखेर सरकारले तीन दिनको म्याद दिएर पुनः प्रस्ताव आव्हान गर्ने भएको छ ।
कम्पनीले चीनबाट ल्याएको र्यापिड टेष्ट किटको गुुणस्तरको बारेमा भने नयाँ तथ्य खुलेको छ । सरकारले स्वास्थ्य उपकरण खरिदको औपचारिक निर्णय अगावै ओम्नीले गुणस्तरहीन किट विभिन्न माध्यमबाट स्थलमार्ग हुँदै मगाइसकेको थियो । तीमध्ये केहीलाई तिब्बत सरकारले निर्यातमा रोक लगायो भने केहीलाई नेपाल भित्र्याइयो । अहिले तीनै किटको बारेमा प्रश्न उठेको बताइएको छ ।
अपारदर्शी ढंगले स्वास्थ्य सामग्री खरिदको बन्दोबस्त मिलाएको आरोप लागेको ओम्नी समूहका हर्ताकर्ता तुलबहादुर सिंह (हरी), केशरबहादुर सिंह र पारस के.सी. हुन् । गुल्मीका सिंहको कम्पनी ललितपुरको कृष्ण गल्लीमा रहेको भनिएपनि कम्पनीमा थप ककसको संलग्नता छ भन्ने विवरण हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । तर, उपल्लो तहको राजनीतिक पहुँच राख्दै आएका तुलबहादुरको कम्पनीले यसअघि सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भिडियो कन्फरेन्स रुम बनाएको थियो । त्यसपछि नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको ‘कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी’ अन्तर्गत झण्डै चार अर्ब रूपैयाँ बराबरको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्रममा भ्रष्टाचारको विषय उठेपछि उक्त कार्यक्रम हाललाई स्थगित गरिएको छ । लोडसेडिङ्ताका उनी चिनियाँ जेनेरेटर कम्पनीको नेपालमा आधिकारिक वितरक समेत थिए । पछिल्लो निर्वाचनमा सिंहले नै निर्वाचन आयोगको परिचय पत्र र मतदाता नामवलीको छपाइको जिम्मेवारी पाएको समेत बुझिएको छ । सबैभन्दा रोचक कुरा चाँहि सिंहले प्रायः विशेष समयमा सोझै गरिने खरिद र निर्माणको काम मात्र गर्दै आएका छन् ।
लकडाउन अब यसरी लुजडाउन